Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): April 2010
ကိုထွေး Tuesday, April 27, 2010
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့ ၉ ပါးသီလကိုခံယူ ဆောက်တည်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် ယတြာ ချေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သံဃာတော်များက ဆိုသည်။
ကိုထွေး Saturday, April 24, 2010
စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံသည့် ပါတီများကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေး လေ့လာသူများက ဆိုသည်။
အပစ်ရပ် SSA ဥက္ကဌ HGF လက်ခံ၊ တပ်ဖွဲ့နှစ်ခြမ်းကွဲဖွယ်ရှိ
Sunday, 25 April 2010 17:33 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
Sunday, 25 April 2010 11:47 Hseng Khio Fah
Burmese military junta has begun to launch the military attacks on the United Wa State Army (UWSA), the 171st Military Region based along the Thai-Burma border in southern Shan State.
ကို(၂)/ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၁၀
ကရင်နီပြည် လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လင်ဖိုကျေးရွာမှ ပဒါးညေးကျေးရွာသို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးများ ထမ်းရောင်းသော ပအိုဝ်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား ညလမ်းသရဲများ၏ လုယှက်မှုကို ခံရသည့်အပြင် အတင်းအဓ္ဓ ပြုကျင့်မှုကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်ဟု အခင်း ဖြစ်ပွားမှုကို သိရှိသော ရွာသားတဦးက ပြောသည်။
Tuesday, 20 April 2010 14:57 Hseng Khio Fah
The newly formed Shan Nationalities Democratic Party (SNDP) plans to contest in 40 out of 55 townships in Shan State in the forthcoming general elections, according to party chairman, Sai Ai Pao.
ကိုထွေး Tuesday, April 20, 2010
၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) က စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှုများ အပါအ၀င် မဟာမိတ်များနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံမှုများကို ယခု ရက်ပိုင်း အတွင်း ပိုမို ပြုလုပ် လာသည်။
ခက်ထန် Monday, April 19, 2010
ယနေ့အထိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်သော ပါတီ ၁၉ ခု ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အများဆုံး အနိုင်ရခဲ့သည့် ပါတီအများစု ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် မှတ်ပုံ မတင်ကြကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုကြောင်း လျောက်ထားသည့်ပါတီ ၁၆ ခုရှိပြီဖြစ်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားသည့် ပါတီမှာ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့အထိ ၁၆ ခုရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Rangoon - A series of explosions on Thursday in old capital of Rangoon, Burma killed at least nine people and injured up to 62, police and hospital sources said.
Three blasts were reported in Mingalartaungnyunt township, nearapopular lake in Rangoon, at 3:10 pm (0840 GMT), saidapoliceman who asked to remain anonymous.
နေင်း ၁၃၇၂ ဗား ဒဲဉ်ဟားလာကားလယို၊ နေင်းလီအွဉ်းကဲုင်ချာ နေင်းတသာကူစပ်၊ မင်္ဂလားအောဝ်းငါးသမယတွင် ပအိုဝ်းစွိုးခွိုတွမ်း ဖူးဝေးမွိုးဖာ ရဲုင်းဖက်သွအာသီး ကားကအောဝ်း၊ အင်းမိုးချက်တွမ်းထာမာတာဝန်းဖုံး ယံအောင်းမျင်း၊ ဘ၀တသက်လွုမ်း ယံထင်းထို တသွောင်း ချမ်သား လွိုင်းကွုန်ထဲင်းထဲင်းထွူတဲင်၊ နမ်းသနီပါ ယံအုံဟောဝ် ခြွိုင်းသန်၊ ယံမွန်းသွိုပျော်းသွင်းလွသွော့ စွုမ်းဖြာဖြာအကျောင်။
BANGKOK - As election fever grips Myanmar, the ruling junta is busy preparingaseries of steps, including an amnesty of political prisoners, to try to make the vote more credible in the international community.
This has becomeapriority after the opposition party National League for Democracy (NLD), led by pro-democracy icon Aung San Suu Kyi, decided to boycott the vote, whose date has yet to be announced.
Burma junta chief Than Shwe (Reuters)
The Norwegian state secretary currently in Burma for high-level talks has said that the country remains “one of the world’s most controversial…in the eyes of the international community”.
Gry Larsen, who backs international engagement with the ruling junta, said in an article on6April prior to arriving in Burma that the international community should also “examine carefully” whether current policy to Burma “has in fact promoted greater openness and economic and democratic development”.
ဗွာသရား။ ဧပြီလ (၇) ရက်၊ ၂၀၁၀။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ပအိုဝ်းဒေသရှိ ရွာတိုင်းလိုလိုမှာ ထူးဆန်းတာ တခုကတော့ လူတွေက ရွာသူကြီးအလုပ်ကို မလုပ်ချင်ကြဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရွာသူကြီးဖြစ်တဲ့ သူဟာ လာသမျှ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ လိုအပ်တဲ့ ပေါ်တာအထမ်းသမားများကို တောင်းလာလို့ရှိရင် အချိန်မီပို့ပေးရတယ်။ တချို့တပ်က တောင်းလာတဲ့ ဆက်ကြေးတွေကို အချိန်မီပို့ပေးနိုင်ဖို့အရေး တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း ငွေလက်ကောက်ပေးရတယ်။
By KO HTWE Wednesday, April 7, 2010
Four more political parties submitted applications on Monday and Tuesday to the Union Election Commission to take part in the national election later this year.
A total of 11 parties have applied to register to contest in the election so far.
ဝီရ/ ၆ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
By KO HTWE Monday, April 5, 2010
The Pa-O National Organization(PNO) submitted an application to the Burmese Election Commission on Friday to register asapolitical party, according toastate-run newspaper.
The PNO is the seventh group to seek to formapolitical party after the Burmese regime announced the party registration law.
Washington Post 4th April.
IN ONE SENSE, the farcical election taking shape in Burma,aSoutheast Asian nation of 50 million people, offers good news. Burma's generals would not go to such lengths to create the appearance of democracy unless they cared about global opinion. That suggests that outside nations with an interest in promoting peace and democracy in Burma have more leverage than is commonly believed. On the other hand, this is good news only if those nations are willing to use that leverage inaconstructive way. On that front, there'salong way to go.
ဖြားဗွာလှဖေသည် ၁၉၁၀ ခုနှစ် မတ်လ (၂၆)ရက်နေ့တွင် သထုံခရိုင် ဘီးလင်းမြို့နယ် ညောင်ပင်လင်း တိုက်နယ် သံပုရာပင်ရွာနေ အမိ မွိုးနန်းဆီး အဖ ဖြားဒွန်းတို့မှ ဖွားမြင်သည့် တတိယမြောက်သားဖြစ်သည်။ မွေးချင်း မောင်နှမများမှာ အစ်မ နန်းစိန်ခင်နှင့် အစ်ကို ဖြားလွန်းမောင် တို့ဖြစ်သည်။ ဖြားဗွာသည် အိမ်ထောင်ဆက်သုံးဆက်ရှိပြီး နောက်ဆုံး အိမ်ထောင်ဆက်မှာ ဟိုပုံးမြို့နယ် မဲုင်းကောင်ဒေသ ကျောက္ကဆျားရွာမှ မွိုးဟုံဗဲဖြစ်သည်။ သားသမီးများမှာ နန်းအေးကြည်၊ ခွန်ဖေသန်း (ကျဆုံး)၊ ခွန်တမောင် (ကျဆုံး)၊ ခွန်ဖိုးတုတ်၊ ခွန်ဖိုးသိန်း (ခ) ခွန်စံလွင် (PNO) နှင့် နန်းဒွီး တို့ဖြစ်ကြသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ ၀၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ်
ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်တဦးသည် ဥရောပ သမဂ္ဂ EU ၏ နာမည်ပျက် စာရင်းတွင်ပါရှိကြောင်း မဇ္ဈိမက စုံစမ်းသိရသည်။
၎င်းတို့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ နိုင်ငံတော် ဒုတိယ တရားသူကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိုးနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး ဒေါက်တာတင်အောင်အေးတို့ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။
ဟိုပုံးလွင်ပြင်ရဲ့ အရှေ့ဘက်က တောင်-မြောက်သွယ်တန်းနေတဲ့ မဲနယ်တောင်တန်းနှင့် လွယ်မော် တောင်တန်းကြီးဟာ တချိန်က ပအိုဝ်းသူပုန်များလို့ခေါ်တဲ့ အဖြူ နှင့် အနီ ကျက်စားရာနေရာများထဲက တနေရာဖြစ်တယ်။အဖြူဆိုတာ အောင်ခမ်းထီ ဦးဆောင်တဲ့ PNO တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ အနီဆိုတာ တာကာလယ် ဦးဆောင်တဲ့ ရလလဖ တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ ဘန်းယဉ်၊ ဆီဆိုင်မှာ တပ်စွဲထားတဲ့ ဗမာစစ်တပ် ခလရ ၄၂၃၊ ခလရ ၄၂၄၊ ခလရ ၄၂၅၊ ခလရ ၄၂၆ တွေက အမြဲထိုးစစ်ဆင်တဲ့ ဒေသဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာ အဲဒီနေရာက ပျောက်ကျားစစ်ပွဲများ မကြာခဏ ဖြစ်ခဲ့တယ်။